30 sano kadib, Rooble oo ku safray duullimaad heer RW, kana degay Mombasa | KEYDMEDIA ONLINE
MOMBASA, Kenya – Waftiga uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xil-gaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa gaaray magaalada xeebeedkaa Mombasa, halkaas oo kulamo uu kula qaadan doono Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Sida uu sheegay Afhayeenka Xukuumadda Maxamed Ibraahim Mucalimow, Ra’iisul Wasaare Rooble, ayaa maanta ku safray duulimaadka, SOM-002, kadib markii Soomaaliya buuxisay Shuruucdii duulista hawada.
Sida caadiga ah Madaxweynayaasha Adduunka waxa ay qaataan duulimaadyada 001 halka Ra’iisul Wasaarayaashana ku socdaalaan duullimaadka 002, hayeeshee, RW Rooble, wuxuu maanta ku safray duulimaadka heer Ra'iisul Wasaare ee 002.
“Maanta Ra’iisul Wasaare Rooble waxa uu duulimaadkiisu yahay SOM-002 taas ah ka dhigan in xitaa duulimaadyada kale ee caalamiga ah in ay la socdaan in duulimaadkaas uu la socdo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble”, ayaa yiri Afhayeenka Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Mocalimuu.
Sida uu xusay Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Maxmed Cabdirisaaq, Ra’iisul Wasaaraha ayaa ugu yaraan Afar maalmood booqasho ku joogi doonaa Kenya, isagoo ka sakow Madaxda dalkaas, kulammo la yeelan doona Jaaliyadda Soomaalida ee ku sugan Nayroobi.
Maxuu salka ku hayaa safarka Rooble
Sii-hayaha xilka Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Rooble, inta uu booqashada ku joogo Kenya, wuxuu kulamo la yeelan doonaan madax uu ugu weyn yahay Uhuru Kenyata, wuxuuna kala hadli doonaa arrimo ku saabsan xiriirka labada dal.
Afhayeenka Xukumadda, Maxamed Ibrahim Macallimow, ayaa kaliya booqashadaa Ra’iisul Wasaaraha, ku macneeyay dib u hagaajinta xiriirka diblumaasiyadeed ee u dhaxeeya dowladaha dariska ah.
Afhayeenka Ra’iisul wasaaraha, wuxuu meesha ka saaray guud ahaan wararka sheegaya in wadahadalla ay qeyb ka yihiin arrimo la xariira Badda Soomaaliya ee Kenya muranka galisay.
“Ra'isul wasaarahana wuxuu aaminsan yahay, kiiska badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya uu yaalo maxkamadda, maxakamaddana ay go'aan ka gaari doonto, laakiin iyada oo arrinta maxkamadda ay jirto ayey dalalku xiriirkooda ay hagaajin karaan”. Ayuu yiri Macalimow.
“Dano badan ayaa ka dhaxeeya Labada dal sida Qaxootiga Soomaalida, Ciidamada Midowga Afrika iyo deris wanaagga waana waxyaabaha ay kawada hadlayaan Ra’iisul Wasaasre Maxamed Xuseen Rooble & Madaxweyne kenyatta”. Ayuu sidoo kale yiri Muacalimow.
Farmaajo oo muddada xil-heynta ka idlaatay lix bil ka hor, ayaa 7-dii bishaan soo saaray wax uu ugu yeeray wareegto, uu hay’adaha dowladda ku faray in aysan gali kari heshiisyo, hayeeshee Rooble, ayaa taas baddalkeedaa tilmaamay inuu Xukuumaddiisu dalka masuul ka tahay xilligan, kuna dhaqmeyso sharcida dalka u yaalla oo kaliya.